मिलन विश्वकर्मा | गृहपृष्ठ | Page 5
मिलन विश्वकर्मा Articles 137
काठमाडौं । बीमा कम्पनी (बीमक) ले अब घरजग्गा व्यवसायमा पनि लगानी गर्न पाउने भएका छन् । साथै कृषि, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता पूर्वाधारको निर्माणमा पनि ऋण वा पूँजी लगानी गर्र्न पाउने नयाँ व्यवस्था...	बिस्तृतमा
काठमाडौं । किसानले अब कफीखेतीको पनि बीमा गर्न पाउने भएका छन् । बीमा समितिले ‘कफी खेती बीमालेख’ लागू गरेपछि किसानलाई उत्पादन वा बोट वा दुवैको बीमा गर्ने बाटो खुलेको हो । समितिले ‘बाली तथा पशु...	बिस्तृतमा
काठमाडौं । पुनर्बीमामार्फत ५ वर्षमा रू. ३२ अर्ब ३७ करोड देशबाट बाहिरिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ देखि २०७४/७५ सम्मको अवधिमा उक्त रकम बाहिरिएको हो । बीमा समितिले हालै तयार गरेको ५ वर्षको...	बिस्तृतमा
७३ प्रतिशत नेपाली बीमाको दायरा बाहिर
on: March 08, 2019 समाचार
काठमाडौं । बीमा समितिको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालको ७३ प्रतिशत जनसंख्या जीवन बीमाको दायराभन्दा बाहिर छ । हालसम्म ४९ लाख ८७ हजार नेपालीले जीवन बीमा गरेका छन्, जुन नेपालको कुल जनसंख...	बिस्तृतमा
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन उन्मुख
on: March 06, 2019 समाचार
काठमाडौं ।चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ बजेटमा बीमा सम्बन्धी गरिएका विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वयन उन्मुख देखिएका छन् । साथै, पुस मसान्तसम्ममा बीमा सम्बन्धी दुईओटा व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन भ...	बिस्तृतमा
नेपालको बीमा बजारले लामो समयसम्म फड्को मार्न सकेको थिएन । त्यो अवस्थामा बीमा बजारमा प्रविधिको विकास हुनु आफैमा चुनौतीपूर्ण थियो, जसले गर्दा कम्पनीहरूले आफ्नो गतिविधि लामो समयसम्म परम्परागत श...	बिस्तृतमा
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशिका
on: February 26, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । बीमा कम्पनी (बीमक) लाई अब बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत पब्लिक कम्पनीको ऋणपत्रमा लगानी गर्न बाटो खुल्ने भएको छ । बीमा समितिले संशोधन गर्न लागेको बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशिकामा...	बिस्तृतमा
२० बीमा कम्पनीको पुगेन चुक्तापूँजी : बोनश शेयरमार्फत पुर्‍याउन आदेश
on: February 24, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी बढाउन अब म्याद नथप्ने भएको छ । समितिले हालका लागि कम्पनीहरूलाई गत आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट बोनस शेयर (लाभांश) बाँडेर चुक्तापूँजी बढाउन आदेश...	बिस्तृतमा
काठमाडौं । यो साता छापावाला सुनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत बुधवार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ६३ हजार ३ सय पुगेको थियो । यो मूल्य हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च भएको नेपाल सुनचाँदी...	बिस्तृतमा
निर्जीवन बीमा बजार : ६ महीनामा १९ कम्पनीको नाफा रू. १ अर्ब ३७ करोड
on: February 20, 2019 समाचार
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २० ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १९ ओटाले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को ६ महीनामा रू. १ अर्ब ३७ करोड ६५ लाख खुद नाफा कमाएका छन् । दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले भने...	बिस्तृतमा